बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै…… – Hamro Nepali Samachar
विमानस्थलमा राजेश हमालसँग ओलीको जम्काभेट हुँदा…
दुबई मा आएको एक नेपाली युवाको ठगी धन्दा ।
रश्मिका मन्दना र विजय देवेराकोन्डा बिहे गर्ने तयारीमा
फेसबुकमा चिनजान नभइकन अन्जान मान्छेलाई नामको आधारमा सर्च गरेर गाली दिने भिमा थापाको बारेमा छानबिन हुदै ।
रियल मै हिरो देखिने नबमोडल तथा समाजसेबी रबि जङ्ग बिष्ट को अभिनय मा कभर गित रिलिज ।
जबर्जस्त फेसबुकमा म्यासेज गर्ने भिमा थापा लाई मानहानी को मुद्दा लाउने तयारी ।
खानामा कपाल भेटिए के गर्ने ? खाने वा नखाने यो हेर्नुहोस्
आजको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल माघ ०४ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२२ जनवरी १८ तारिख
रातभरी भिजाएको हरियो खुसार्नीको पानी बिहानै पिउनुहोस्, भाग्छन् यी रोगहरू
मिलमा सल बे’रिएर महिलाको मृत्यु
Home/ समाचार/बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै……
बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै……
काठमाडौ । छोरी र बालिकाहरु माथि हुने नराम्रा घटनामा परिवारकै सदस्य संलग्न भएका धेरै उदाहरण देखिएका छन् । बैतडी घटनामा पनि नातामा भाई नै संलग्न भएको खुलेको छ । यता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि आफ्ना २ नाबालक बहिनीहरुलाई त्यस्तै कार्य गरेको अभियोगमा दाजु वि’रु’द्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
घटना सार्वजनिक भएपछि दाई एकाएक भा’गेर भारत पुगेको हुनसक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । घरमा कोही नभएको बेलामा घरमा आउने सानो बुवाका छोरा दाईले १० र १२ वर्षका बहिनीलाई नराम्रो कार्य गरेको अनुसन्धानवाट खुलेको हो ।
परिवारले घटना ढिलो थाहा पाएकाले प्रहरीमा पनि ढिलोगरी उजुरी परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका मु द्दा फाँटका इन्चार्ज शुभराज ब मले बताए । २१ मंसिरमा दाईले नै १० र १२ बहिनीहरुलाई क र णी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘दाई भा गे र भारत गएको आशंका गरिएको भएपनि प्रहरीले खोजी जारी राखेको जनाएको छ ।
‘घटना विवरण सुनाउँदै बालिकाहरुका बुवाले भने, हामी नभएको बेलामा घरमा आउँदो रहेछ। ध म्की दिएर कपडा खो’ ‘ल्दै विवाह अघि नै सबैकुरा सि’काइ’दिन्छु भनेर हाम्रा भि’त्रि अ’ङ्ग खे’ला’उ’ने ज’स्ता काम ग’र्दो रहेछ । ‘जेठी छोरीसँग त्यस्तो व्य’वहार भएको छोराले देखेर हामीलाई भन्यो। छोरीसँग बुझ्दा कान्छी छोरीसँग त्यस्तै क्रि’या’कला’प पटक–पटक गरेको थाहा पाएपछि उजुरी गरेका हौं।’
यो पनि : सुत्केरी गाईलाई भत्ता
झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । सुत्केरी गाईलाई दुई हजार भत्ता । यसमा अनौँठो मान्नुपदैन । ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले सुत्केरी गाईलाई दुई हजार भत्ता दिँदै आएको छ ।
पशुपालनबाट आत्मनिर्भर बनाउन सो गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ‘सुत्केरी गाई प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख एन्जलबाबु कार्कीले बताउनुभयो । आव २०७५÷७७ मा एक हजार सुत्केरी गाईलाई भत्ता गाउँपालिकाले वितरण गरेको छ ।
दुग्धजन्य खाद्यवस्तुमा गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुनका लागि पशुपालक घरपरिवारले पालेको गाई वा भैँसी सुत्केरी (दुुहुनो भएमा) रु दुई हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गरउँदै आएको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत गएको वर्षमा एक हजार दुनो गाईको लागि रु २१ लाख ४१ हजार भत्ता वितरण गरेको पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।
एक घरमा एउटा गाई वा भैँसी सुत्केरी भएमा गाउँपालिकाले रु दुई हजारका दरले नगद प्रदान गर्दै आएको छ । एउटै घरमा एकदेखि बढी गाई वा भैँसी सुत्केरी भएमा रु एक हजार थप गरेर नगद प्रदान गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुत्केरी गाई र भैँंसीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको पशु शाखाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका पशुपालकहरुलाई भैपरी आउने विभिन्न दैवीप्रकोप र महामारी रोगहरुबाट पर्न सक्ने आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन गत आवमा दुई हजार पशुहरुको बीमा गरेको गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका एउटा पशुलाई प्रिमियमबापत रु एक हजार १०० दरले दुई हजार पशुको बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा रु छ लाख ५० हजार गाउँपालिकाले बीमाबापत पशुपालकको पशुको बीमा रकम तिरिदिएको गाउँपालिकाको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
जागर हुने पशुपालक कृषकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति भएको सिदिङ्वा गाउँपालिका–४ का पशु व्यवसायी सीताराम गौतमले बताउनुभयो । दुहुनो गाई तथा विभिन्न प्रोत्साहन र अनुदान कार्यक्रमले स्थानीयवासीको आर्यआर्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “गाउँपालिकाले दिएको दुहुनो गाई प्रोत्साहन भत्ताले दुहुनो गाईको लागि दाना र नून दिन पुगेको छ ।” गाउँपालिकाभित्र सङकलन भएको दुग्ध छुर्पी साथै दुग्धजन्य पदार्थ इलाम पु¥याएर बिक्री वितरण गर्दै आएको सिंहदेवी दुग्ध डेरी सञ्चालकसमेत रहेको गौतमले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले कृषकको लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ भन्ने सुन्न मात्रै पाएका कृषक सरु राई अहिले निकै खुशी हुनुभएको छ । राईले भन्नुभयो, “मेरो गाई सुत्केरी हुन नसकेर मरेको थियो । गाउँपालिकाले बीमाबापत रु ३४ हजार दियोे ।” विगतका दिनमा पशु मरे भने ठूलो आर्थिक क्षति हुन्थ्यो तर अहिले प्रत्येक घरमा पशु बीमा गरिदिएपछि आर्थिक क्षति हुनबाट जोगिएको राईले बताउनुभयो ।
विकास निर्माण क्षेत्रमा मात्र ठूलो लगानी गर्दा जनजीवनमा आर्थिक विकास हुन नसक्ने भएकाले प्रत्येक घरपरिवारमा उद्यमी बनेर आयआर्जन गर्नको लागि किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको सिदिङ्वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले बताउभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाका कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने योजनामा छौँ ।” प्रत्येक परिवारले गाईभैँसी दुहुनो पाल्न थाले पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने र परिवार नै स्वस्थ हुने भएकाले पनि पशुपालकलाई पालिकाले प्रोत्साहन गरेको उपाध्यक्ष ताम्लिङले बताउनुभयो । गाईपालनबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने भएकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुग्धजन्य वस्तुबाट मात्र गाउँपालिकामा दैनिक रु ५० हजार भित्रिने गरेको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा सीमित घरपारिवारले मात्र दुहुनो गाई पाल्दै आएको थियो । स्थानीय सरकार आएसँगै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान र प्रोत्साहनका साथै बीमा कार्यक्रमले पशुपालक उत्साहित हुँदै गएको सिदिङ्वा गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विकास थेवेले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा उत्पादन भएको दूध ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामसम्म पु¥याउने गरेको डेरी सञ्चालक राजेन्द्र कडरियाले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाभित्र प्रायः सबै घरपरिवारमा दुहुनो गाईपालन थाल्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा छ । गत माघ मसान्तसम्ममा सिदिङ्वा गाउँपालिकामा ९६७ वटा दुहुनो गाईबाट चार दशमलव पाँच मेट्रिक टन, ७५८ वटा भैँसीबाट दुई मेट्रिक टन र १५० चौँरीबाट एक मेट्रिक टन दुग्ध पदार्थप्रति महिना उत्पादन हुँदै आएको छ ।
दूधजन्य पदार्थमा आत्मर्भिर हँुदै
गाउँपालिकाले पशुपालकलाई अनुदान र प्रोत्साहन दिन थालेसँगै गाउँपालिका दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । यसअघि गाउँपालिकामा डेरी उद्योग नभएको र अहिले सिदिङ्वा गाउँपालिकामा आठ वटा डेरी उद्योग दर्ता भएका छन् । दैनिक नौ हजार लिटर दुग्ध उत्पादन हुँदै आएको पशु शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । घिउ एक महिनामा ५०० केजी तथा ७५० केजी छुर्पी उत्पादन हुँदै आएको छ ।
कृषि र पशु क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान र प्रोत्साहले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने समुदायको आयआर्जनमा ठूलो टेवा पुगेको सिदिङ्वा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नन्दलाल गौतमले बताउनुभयो । दुहुनो गाई प्रोत्साहन, पशु बीमा साथै गोठ सुधार कार्यक्रमले कृषकमा उत्साह आएको वडाध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रत्येक घर परिवारमा पशुपालनबाट आयआर्जन भइरहेको छ, त्यसै अनुसार गाउँपालिकाले अनुदान पनि दिँदै आएको छ ।” घरमा दुहुनो गाई पालेपछि परिवारमा स्वरोजगार पनि हुने दुग्ध सेवनले परिवारजनको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुने गौतमले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा पशुजन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा महिला १० जना र पुरुष १४ जनाले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाको पशु शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रीमानलाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्यै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन ….
अहिले के गर्दैछन् छोरोबाट छोरी परिवर्तन भएकी सन्तोष पन्तकी छोरी ?
ग’ र्भ रोक्न को लागि नयाँ तरिका , यो निकै प्रभाबकारी भएको डाक्टर को दाबी ।
निर्मला ह’त्या काण्ड : शंकास्पद एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ
गोंगबुबाट सेनाका हवल्दार सहित चार जना पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ !